Ekpere Santa Muerte maka ọrụ. ? Na -arụ ọrụ n'ime awa 24!
2 Mingụ Nkeji
Ekpere Santa Muerte maka oru Ọ dị ike nke ukwuu.
Ọ na - arụ ọrụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na - achọ ọrụ dịka ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ iji dozie nsogbu ụfọdụ a na - egosi gị na mpaghara ọrụ gị.
Ike na-adịghị mma anyị na-eche, oge ụfọdụ, n'ebe ọrụ anyị dị njọ ma nwee ike ịmetụta ndị ọrụ ibe anyị, ndị isi na anyị onwe anyị ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi.
1 Ekpere Santa Muerte maka oru
1.1 Ọnwụ dị nsọ ọ̀ dị ike?
1.2 Ọ dị njọ ikpe ekpere a?
1.3 Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere nke ọnwụ nsọ maka ọrụ?
Ezigbo Ọnwụ m hụrụ n'anya, a hụrụ m n'anya, a na m arịọ gị okwu ndị a n'ihi na achọrọ m enyemaka gị.
N'ebe ọrụ, achọpụtara m na m na-enwe nsogbu na-eme ka m nwewe obi abụọ na m ga-adịgide.
Abụbu m anụ ugo nke na-eripịa ma na-enwe anyaụfụ chọrọ ijide m.
Anọ m na-ebi n’oge ọjọọ m chọrọ ịgbanwe, achọrọ m ọrụ ebe enweghị anyaụfụ, ebe a ghọtara ikike m ma nwee ike ịgbapụta nke ọma. Iji nye ezinụlọ m nkasi obi ha chọrọ.
A na m arịọ gị ka ị debe ọrụ m, ọ bụrụ na ọ nweghị ike. Nyere m aka inweta nke ka mma. A na m arịọ maka ụbọchị m ga-aga ajụjụ ọnụ.
Achọrọ m imezu ebumnuche ọkachamara m iji nwee afọ ojuju.
Achọrọ m ọrụ ka mma, ụgwọ ọrụ ka mma, na ihe mgbaru ọsọ ọkachamara m enweghị oke.
Achọrọ m ịpụ na-aka mma. Ọ bụ ya mere m ji bịakwute gị, ịdị mma na ike gị bụ infinito na m ga-ahapụrụ nsogbu m n’aka gị. Daalụ, ana m ekele gị na enweghị njedebe, abụ m onye kwere ekwe gị kwesịrị ntụkwasị obi.
Ka ọ dịrị.
A na-etinye ahịrịokwu a n'oge ndị ahụ mgbe anyị na-aga ajụjụ ọnụ ọrụ, mgbe anyị na-achọ itinye akwụkwọ maka ọrụ anyị chọburu, ịjụ nke ahụ na-enyere anyị aka ịnweta nkwalite ma ọ bụ nwekwuo ụgwọ ọnwa anyị, ọ bụrụ na gị na onye ọrụ, onye isi, onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ na-aga n'oge siri ike.
Agbanyeghị, ekpere a ga - enyere gị aka ihe niile metụtara ọrụ niile.
Ọnwụ dị nsọ ọ̀ dị ike?
A na-asọpụrụ ya nke ukwuu kemgbe ọtụtụ afọ, ọkachasị ndị Mexico.
Ndị kwere ekwe na-abawanye ụba na nke a na-egosi ike nke Ọnwụ Nsọ.
Enwere ndị na-eche na ọ bụ mmụọ ọjọọ mana nke a enweghị ihe ndabere mgbe anyị hụrụ ọrụ ebube na enyemaka nke Mụọ Nsọ a nyere ndị niile bịakwutere ya na-achọ nduzi na enyemaka.
Ọ dị njọ ikpe ekpere a?
Ekpere onwe ha abụghị ihe ọ bụla dị ize ndụ.
Agbanyeghị, ọ dị mma iji ha buru ibu maka na ọtụtụ oge anyị na-arịọ maka ihe na-adabara anyị abụọ, enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ.
Ekpere bu ihe puru iche n'ihi na anyi na-abanye na nari ala nke pacenti anyi aghaghi ima banyere imeghari maka na ihe ojoo na-ezoro na acho ndi adighi ike n’ okwukwe.
Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere nke ọnwụ nsọ maka ọrụ?
N'oge ọ bụla, ekpere a bụrụ ngwa ọgụ anyị oge niile n'agbanyeghị ebe anyị nọ.
Ọtụtụ na-adụ ọdụ ịchụ ebe ịchụàjà ma ọ bụ ịkwadebe ebe a na-ekpe ekpere ma nke a nwere ike inyere anyị aka ilekwasị anya n'ihe anyị na-eme.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na ọ bụrụ na anyị enweghị otu a, ekpere na-arụ ọrụ ma dịkwa ike n'ihi na ejiri okwukwe ya mee ya bụ na ọ bụ naanị ihe achọrọ ka anyị mezuo n'ụzọ iwu.
Ekpere siri ike ma sie ike na Santa Muerte maka ịhụnanya agaghị ekwe omume
4 na-ekpe ekpere maka Saint Cyprian dị ike
Ekpere ka ere ulo